yamin oo, Author at Chelmo News Portal - Page3of 4
Author: yamin oo
Home›Author: yamin oo (Page 3)
ဒါကတော့ (၂၀၂၀) အောက်တိုဘာလကုန်မှာ Kpopmap ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အခန့်ညားဆုံး ကိုရီးယားမင်းသားတွေအဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတဲ့ oppa တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1. Yoon ShiYoon 2. Lee MinHo 3. Ji ChangWook 4. Lee JongSuk ...
ဒီစာရင်းမှာဆိုရင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ Social Media မှာ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အနုပညာကြယ်ပွင့်တွေဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်တွေ၊ တီးဝိုင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့ တီဗီကြယ်ပွင့်တွေပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ နံမည်ကြီးနေကြတဲ့ Kpop အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ BTS, EXO, Seventeen, BLACKPINK,TWICE, Red Velvet, GOT7’s Jackson Wang, HyunA, Sunmi တို့အပြင် ...
K-pop boy group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SHINee အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် MINHO ဟာ ‘Lovestruck in the City’ ဆိုတဲ့ ရိုမန့်ဒရာမာမှာပါဝင်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ MINHO ရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ SM Entertainment ကလည်း KaKaoTV ရဲ့ ...
လက်ရှိအချိန်မှာ K-pop လောကရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ BE Album ထွက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယ်လ်ဘမ်မှာဆိုရင်တော့ producing နဲ့ directing ပိုင်းတွေအပြင် သီချင်းရေးတဲ့အပိုင်းမှာပါ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာတော့ Big Hit Entertainment ...
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ Jihyo နဲ့ Kang Daniel တို့ဟာ လမ်းခွဲဖြတ်စဲလိုက်ကြပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုရီးယားမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Dispatch ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ သူတို့နှစ်ဦးဟာ များပြားလှတဲ့ အလုပ်အချိန်ဇယားတွေကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အချိန်မပေးနိုင်လို့ လမ်းခွဲလိုက်ကြတာပါတဲ့။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ TWICE အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Jihyo ရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ JYP Entertainment ဘက်ကလည်း ...
Kem Hussawee နဲ့ Mookda Narinrak တို့ကတော့ So Wayree ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင်တော့ ထိုင်းမှာသာမက Inter မှာပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့ အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ထပ်ရိုက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ရဲ့နံမည်ကတော့ Khey Ban Rai Sapai Hiso ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင်တော့ မင်းသမီးလေး Mookda ...
ထိုင်းရုပ်သံလိုင်း Channel7ကနေ အသစ်ထုတ်လွှင့်မယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်များကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Jark Sadtroo Soo Hua Jai ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ Jett အဖြစ် မင်သား Mik Tongraya နဲ့ Sophita အဖြစ် မင်းသမီး Aum Patcharapa Chaichue တို့က ...
Highest rating TV drama of the year: Roy Pah (Ch7) Best Actor: Boy Pakorn Best Actress: Min Pechaya Rising Star (Male): Puen Khanin Rising Star ...